सरकारले इच्छा विपरित अपहरण शैलीमा बल प्रयोग गरी काठमाडौँ ल्याएको डा. केसीको आरोप - samabeshionline.com
सरकारले इच्छा विपरित अपहरण शैलीमा बल प्रयोग गरी काठमाडौँ ल्याएको डा. केसीको आरोप
प्रकाशित मिति : ४ श्रावण २०७५, शुक्रबार ११:४२
बिहीबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी
काठमाडौं । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीलाई सरकारी टोलीले २० दिनपछि काठमाडौं ल्याएको छ । बिहीबार डा. केसीलाई काठमाडौ ल्याइएको हो ।
काठमाडौं ल्याएलगत्तै डा. केसीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो इच्छा विपरित अपहरण शैलीमा बल प्रयोग गरी जुम्लाबाट काठमाडौँ ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।
बिहीबार साँझ एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले आफूलाई अमानवीय रुपमा क्रुरतापूर्वक सत्याग्रहीको इच्छा विपरित अस्पताललाई युद्धभूमि जस्तो बनाएको बताएका छन् । विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘सरकारले गरेको ज्यादतीपूर्ण व्यवहारको घोर भत्र्सना गर्दछु ।’
‘यस सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउने जुम्ला लगायत देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दछु,’ डा. केसीले भने, ‘सरकारको ज्यादतीबाट घाइते भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै ज्यादतीमा संलग्न हुने दोषीहरूलाई कारवाहीको माग गर्दछु ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा डा. केसीले माग पूरा नहुँदासम्म सत्याग्रह जारी रहने बताएका छन् ।
शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज ।
तामाङ चलचित्र “सेर्कु”ले दर्शक रुवाए तर सेर्कु टिमले गलत प्रचार गरेको आरोप
महानगरपालिकाले सडक पेटीमा पसल राख्नेहरुमाथि निगरानी बढाउदै
सुनिल केसीको शब्द तथा गणेश अधिकारीको लय सिर्जनामा “ तिम्रो आयु “ हेर्नुहोस भिडियो सहित
गायक विनय खत्रीको स्वरमा ‘भुरुरु उडेर गयो बरि लै’ सार्वजनिक
रमेश डाँगीको शब्द तथा संगीतमा दशैँ तिहार गीत “ दिदि भाईँ ” भिडियो सहित
नयाँ मुहार फेर्दै नयाँ बसपार्क
गायक सुकदेव लामाले ल्याए “नक्कली को हे मोरी”
गायिका जलजला परियारको उपचारमा एन आर एनआयरल्यान्डका सदस्यद्धारा १ लाख प्रद्धान